Momba anay - Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd.
Takelaka takelaka vita amin'ny takela-by aluminium
Takelaka diamondra alimina aluminium
Takelaka Perforated Aluminium
Takelaka Aluminium Anodized
Takelaka fanesorana ny fiarovana amin'ny slip
Vy mangatsiaka mihodina
Izahay dia mpamatsy orinasa mpamokatra entana, miovaova ary manome lanja ny mpanjifa ary mpamatsy ny akora vita any Shina.
Izahay dia nisolo tena an'i China Mill toa an'i Baosteel, Ansteel ary orinasa vy tsy miankina mivarotra coil sheet / Rolling Steel Rolled Steel / SPCC, coil sheet vita amin'ny vy vita amin'ny vy / SGCC, coil sheet vita amin'ny vy Galvalume / coil vy Aluzinc, coil vy / PPGI efa vita hosodoko, nolokoina mangatsiaka Non voa vy / CRNGO, ary coil sheet aluminium.
Tsy vitan'ny hoe mivarotra fitaovana vy fotsiny izahay fa manolotra serivisy fampidirana solosaina manokana avy any Shina
RuiYi dia mpamatsy matihanina ary mpanamboatra takelaka firaka vita amin'ny aliminioma any Shina ary izahay koa dia miara-miasa amin'ny ozinina aliminioma malaza mikasa ny hamaly ny mpanjifanay amin'ny sehatra samihafa. Ny orinasan-tsika dia niorina tamin'ny taona 1997, ankehitriny ny orinasa dia manana mpiasa mihoatra ny 4000, ao anatin'izany ny mpiasa teknika maherin'ny 300.
Mpanamboatra, Agent, Exporter, Orinasa mpivarotra, mpivarotra
Ny an'ny mpiasa
Amerika Avaratra, Amerika atsimo, Eropa Andrefana, Eoropa Atsinanana, Azia Atsinanana, Azia atsimo atsinanana, Afovoany Atsinanana, Afrika, Oceania, Manerantany
Ho vahaolana tsara indrindra amin'ny famatsian-tsolika vy any Chine.
Manolo-tena izahay hanome vokatra Aluminium kilasy eran'izao tontolo izao. Tsy misy zava-dehibe kokoa amintsika noho ny fahafaham-ponao tanteraka amin'ny serivisinay sy ny vokatra misy kalitao miavaka, fitomboana mitohy, fotoana mety ary fifandraisana misy ifandraisany.
Xiaoxian RuiYi Commercial Trade Co., Limited dia nifantoka tamin'ny fitaovana aliminioma kalitao avo lenta 10 taona mahery tany China. Natomboka tamina asa kely iray izahay, nefa lasa iray amin'ireo mpamatsy lehibe indrindra amin'ny indostria aliminioma ao Shina.
Safidio ny tombony lehibe azontsika
Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd.
Fanisana lehibe mba hiantohana ny kalitaony
Avy amin'ny kaomandy napetraka hatramin'ny fandefasana entana any ivelany, fanaraha-maso kalitao telo no atao mba hahazoana antoka fa mihoatra ny 100% ny tahan'ny vokatra vita. Manana magazay lehibe izahay, ary afaka manome famatsiana ampy ho an'ny mpanjifa mba tsy hatahoran'ny mpanjifa ny krizy tsy misy tahiry sy tsy fahampian'ny tahiry.
Fanaterana ara-potoana sy fitehirizana vola
Mampanantena izahay fa aorian'ny hametrahan'ny mpanjifa baiko dia halefa amin'ny andro mitovy ihany ireo vokatra azo. Xiaoxian Ruiyi Commercial Trade Co., Ltd. dia manome am-pahatsorana vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifa anatiny sy vahiny, ary manome ny mpanjifa vokatra mahafapo.
Traikefa amin'ny serivisy misongadina
Mampanantena izahay fa hanaraka ny lamina rehetra ara-potoana ny orinasanay mba hahazoana antoka fa afaka mandray soa aman-tsara ny entana ny mpanjifa, mihaino ny hevitr'izy ireo sy ny tolo-kevitr'izy ireo hatrany, ary misaintsaina ny olantsika manokana. Avelao ny mpanjifa hahatsiaro maivamaivana.
Aluminium Alloys dia mitazona vokatra avo lenta mandritra ny dingan'ny famokarana manontolo. Manomboka amin'ny fandefasana ingot sy fasika hatramin'ny fizahana dimensional farany dia jerena tsara ny vokatra rehetra araky ny fehezin'ny fanaraha-maso momba ny fizotrany isaky ny fitakiana fanariana.
Ny fotodrafitrasa manara-penitra dia misy spectrometry marobe ho an'ny famakafakana vy, SPC amin'ny fifehezana fasika, fitsapana ara-batana, hiditra amin'ny loko, taratra x, fitsapana tsindry ary fizahana amin'ny lafiny elektronika. Rafitra fitehirizana firaketana an-tsoratra be dia be no manangona ny angon-drakitra mba hahavitana tanteraka. Ny fandaharan'asa momba ny famokarana solosaina vita amin'ny solosaina dia manome fanavaozana ny satan'ny famokarana isan'andro izay mamela tsy tapaka amin'ny fanaterana fotoana.
Ny Aluminium Alloys dia manohy ny fanolorany tena amin'ny kalitao amin'ny alàlan'ny programa mitohy amin'ny fananganana trano ary fanatsarana ny fomba hahazoana ny filan'ny mpanjifa amin'ny ho avy, indrindra amin'ny fampiharana sarotra.
Izay rehetra tianao ho fantatra momba anay
Adress: Xingzhengdadao, Xiaoxian, Suzhou, Faritanin'i Anhui, Sina